Wafdi Ka Socda Dowladda Soomaaliya Oo Jowhar U Tegay Dadaallo Nabadeed * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wafdi Ka Socda Dowladda Soomaaliya Oo Jowhar U Tegay Dadaallo Nabadeed
Jowhar, Mareeg.com: Wafdi ka scda dowladda Soomaaliya oo u hogaaminayo Wasiiru dawlaha wasaarada arrimaha gudaha iyo amaanka Qaranka Mahdi Maxamed Cali oo ay weheliyaan xildhibaanno ka tirsan Barlamaanka ayaa gaaray magaalada Jawhar ee xarrunta gobolka Shabeellaha Dhexe.
Wadiga ka socda dowladda Soomaaliya Jowhar u tegay sidii ay u fidin lahaayeen gogol nabadeed oo lagu heshiisiinayo labo beelood oo horay ugu dagaallamay tuulooyin hoos yimaada Jowhar.
Wasiiru dowlaha Arrimaha gudaha Mahdi Maxamed Cali ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay gogol u dhigi doonto beelihii ku dagaalamay duleedka Jowhar, si loo soo afjaro colaada sida uu yiri.
“Dowladu waxey balan qaaday in wixii dhiman ay wax idinkala qabato wasaarada arrimaha guduhuna gogol ayeey dhigeysaa si loo gaaro xal waara” ayuu yiri wasiirudowlaha wasaarada arrimaha gudaha Mahdi Maxamed Cali.
Wsiirudowla iyo wafdigiisa ayaa sidoo kale kulamo la qaatay madaxda maamulka gobolkaasi iyo waxgaradka beelo dhawaan ku dagaalamay deegaano hoos yimaada degmada Jowhar wuxuuna sheegay in dowladu sida ugu dhaqsiyaha badan ay gogol ugu dhigi doonto beelahaasi.
Wafdigan uu hogaaminayo wasiiru dowlaha wasaarada arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka Mahadi Maxamed Cali ayaa booqday xerooyinka ay ku jiraan dadkii ku barakacay fatahaada wabiga Shabeele, iyagoo u kuur galay xaaladooda nololeed iyo baahida ay qabaan.
Dagaallo beeleed ka dhacay tuulooyin badan oo hoos yimaada Jowhar ayaa sababay iney barakacaan boqolaal qoys oo beeralley ahaa, waxaana dowladda Soomaaliya horay u sheegtay iney waanwaan ka dhex bilaabeyso labada beelood.
Yunis Ali says 8 years ago
Waxaan kacodsanayaa xukuumadda federaalka ee soomaaliya sida dhaqsiyaha badan inay u soo afjarto dagaalada ku daba dheeraadey gobolka shabeelah dhexe .Mahadsanid.